Paradza Kufunga Kwese Kunopesana Nekuziva Mwari! | Nharireyomurindi
Nharireyomurindi—Yekudzidza | June 2019
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zulu
NYAYA YEKUDZIDZA 24
Paradza Kufunga Kwese Kunopesana Nekuziva Mwari!
“Tinoputsa kufunga nechinhu chese chakakwirira chinomutsirwa kupesana nekuziva Mwari.”—2 VAK. 10:5.
1. Muapostora Pauro akapa yambiro ipi kuvaKristu vakazodzwa?
“REGAI [kuumbwa] nemamiriro ezvinhu epanguva ino.” (VaR. 12:2) Pauro akanyorera vaKristu vepakutanga mashoko iwayo. Nei akapa yambiro yakadaro kuvarume nevakadzi vakanga vakazvitsaurira kuna Mwari uye vakazodzwa nemweya mutsvene?—VaR. 1:7.
2-3. Satani anoedza sei kutibvisa pana Jehovha, asi tingadzura sei zvinhu “zvakadzika midzi” mupfungwa dzedu?
2 Pauro ainetseka nekuti mafungiro akaipa enyika yaSatani aikanganisa vamwe vaKristu. (VaEf. 4:17-19) Munhu wese anogona kukanganiswa nemafungiro akadaro. Satani, mwari wenyika ino, anoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti aedze kutibvisa pana Jehovha. Semuenzaniso, kana akaona kuti tinoda mukurumbira, anoshandisa izvozvo kuti atibvise pana Jehovha. Angatoita kuti tive nemafungiro aanoda achishandisa zvinhu zvatakadzidza kumba, kuchikoro uye kuvanhu vatinoswera navo.
3 Tinokwanisa here kudzura zvinhu “zvakadzika midzi” mupfungwa dzedu? (2 VaK. 10:4) Pauro akapindura kuti: “Tinoputsa kufunga nechinhu chese chakakwirira chinomutsirwa kupesana nekuziva Mwari; uye tinotapa kufunga kwese kuti tikuite kuti kuteerere Kristu.” (2 VaK. 10:5) Saka tichibatsirwa naJehovha, tinokwanisa kubvisa mafungiro akaipa. Sezvinongoita mushonga unorapa munhu anenge akuvadzwa nemuchetura, Shoko raMwari rinogona kubvisa mafungiro akaipa atingava nawo anokonzerwa nenyika yaSatani.
“KUCHINJA PFUNGWA DZENYU”
4. Vakawanda vedu taifanira kuchinja zvinhu zvipi patakatanga kugamuchira chokwadi?
4 Funga zvinhu zvawaifanira kuchinja pawakatanga kugamuchira chokwadi cheShoko raMwari ukasarudza kushumira Jehovha. Vakawanda vedu taifanira kurega kuita zvinhu zvakaipa. (1 VaK. 6:9-11) Tinotenda chaizvo kuti Jehovha akatibatsira kusiya zvinhu izvi zvakaipa!
5. Zvinhu zvipi zviviri zviri pana VaRoma 12:2 zvatinofanira kuita?
5 Asi hatimbofaniri kuvarairwa tichifunga kuti kuchinja kwatakaita kwakakwana. Kunyange zvazvo takarega zvivi zvakakura zvataiita tisati tabhabhatidzwa, tinofanira kuramba tichishanda nesimba kuti tisava pamuedzo wekudzokera kuzvinhu zvataiita kare. Tingazviita sei? Pauro anopindura kuti: “Regai [kuumbwa] nemamiriro ezvinhu epanguva ino, asi shandurwai nekuchinja pfungwa dzenyu.” (VaR. 12:2) Saka pane zvinhu zviviri zvatinofanira kuita. Chekutanga, tinofanira ‘kurega kuumbwa’ nenyika ino. Chechipiri, tinofanira ‘kushandurwa,’ uye izvi tinozviita nekuchinja pfungwa dzedu.
Takanyatsochinja Here Kana Kuti Tinongonyepedzera?
Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “shandurwai” pana VaRoma 12:2 rinoratidza kunyatsochinja kwechinhu chichiva chimwe chinhu chakasiyana nacho, sekuchinja kunoita gonye richiva bhatafurayi. Kushandurwa kunoreva kuchinja mwoyo yedu nepfungwa dzedu. Kusiyana naizvozvo, shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti ‘kunyepedzera’ pana 2 VaKorinde 11:13-15 rinoreva kuchinja nechekunze chete.
6. Tinodzidzei pamashoko aJesu ari pana Mateu 12:43-45?
6 Kuchinja kwaitaurwa naPauro kunopfuura kuchinja zvatiri nechekunze. Kunobata zvese zvatiri. (Ona bhokisi rakanzi “ Takanyatsochinja Here Kana Kuti Tinongonyepedzera?”) Tinofanira kunyatsochinja pfungwa dzedu, kureva maitiro edu, manzwiro edu uye zvido zvedu. Saka tese zvedu tinofanira kuzvibvunza kuti, ‘Kuchinja kwandiri kuita kuti nditevedzere Kristu kunongova kwekunze here kana kuti ndiri kunyatsochinja zvandiri nechemukati?’ Mumashoko ake ari pana Mateu 12:43-45, Jesu anotibatsira kuona zvatinofanira kuita. (Verenga.) Mashoko iwayo anotidzidzisa chidzidzo chinokosha chekuti hatifaniri kungoperera pakubvisa pfungwa dzakaipa, asi tinofanira kudzitsiva nemafungiro aMwari.
‘ITWAI VATSVA PAMAFUNGIRO ENYU’
7. Tingachinja sei zvatiri nechemukati?
7 Zvinoita here kuti tichinje zvatiri chaizvo nechemukati? Shoko raMwari rinopindura kuti: ‘Munofanira kuramba muchiitwa vatsva pamafungiro enyu, uye munofanira kupfeka unhu hutsva hwakasikwa maererano nezvinodiwa naMwari mukururama kwechokwadi nekuvimbika.’ (VaEf. 4:23, 24) Saka zvinoita kuti tichinje zvatiri nechemukati, asi hazvisi nyore. Hatifaniri kungogumira pakurwisa zvido zvakaipa uye maitiro asina kunaka. Tinofanira kuchinja ‘mafungiro edu.’ Izvozvo zvinosanganisira kuchinja zvido zvedu, maitiro edu, uye vavariro dzedu. Izvi zvinoda kuti tirambe tichishanda nesimba.
8-9. Zvakaitwa neimwe hama zvinoratidza sei kuchinja kwatinofanira kuita nechemukati?
8 Ngationei muenzaniso weimwe hama yaimboita zvemhirizhonga. Payakarega kunwa uye kurwa nevanhu, yakakwanisa kubhabhatidzwa. Izvi zvakapa uchapupu hwakanaka munharaunda yayaigara. Asi mumwe musi, ichangobva kubhabhatidzwa, yakasangana nemuedzo wayaisatarisira. Mumwe murume ainge akadhakwa akauya kumba kwehama iyi kunoidenha kuti varwisane. Pakutanga hama yedu yakazvidzora, ikarega kurwisana naye. Asi murume wacho paakazomhura zita raJehovha, hama yedu itsva yakatadza kuzvidzora. Yakabuda mumba ikamurova. Dambudziko raiva papi? Kunyange zvazvo kudzidza kwayakaita Bhaibheri kwakaibatsira kurwisa chido chekurwa, yakanga isati yachinja zvayaiva chaizvo nechemukati.
9 Asi hama iyi haina kukanda mapfumo pasi. (Zvir. 24:16) Ichibatsirwa nevakuru, yakaramba ichifambira mberi zvakanaka. Yakazogadzwa kuva mukuru. Rimwe zuva ari manheru, paImba yeUmambo, yakasangana nemuedzo wayakambosangana nawo makore ainge apfuura. Mumwe murume ainge akadhakwa aida kurova mumwe mukuru. Hama yedu iya yakaita sei? Yakataura zvakanakanaka nemurume uya ainge akadhakwa yakadzikama uye ichizvininipisa, ndokumubatsira kufamba achidzadzarika kuti asvike kumba kwake. Chii chainge chaitika? Hama yedu yainge yachinja mafungiro ayo. Nechemukati, yakanga yachinja kuva munhu ane rugare uye anozvininipisa, zvese zvichiita kuti Jehovha arumbidzwe!
10. Tinofanira kuitei kuti tichinje zvatiri nechemukati?
10 Kuchinja uku hakuitiki nezuva rimwe chete uye hakungoitiki kwega. Zvimwe tingatofanira ‘kushanda nesimba’ kwemakore akawanda. (2 Pet. 1:5) Kuchinja uku hakuitiki nekungoti tava nenguva yakareba tichishumira Jehovha. Tinofanira kuita zvese zvatinogona kuti tichinje zvatiri nechemukati. Pane zvimwe zvinhu zvinokosha zvatinofanira kuita kuti tichinje. Ngationgororei zvimwe zvacho.
ZVATINGAITA KUTI TICHINJE MAFUNGIRO EDU
11. Munyengetero unotibatsira sei kuchinja mafungiro edu?
11 Kunyengetera ndiro danho rekutanga rinokosha ratinofanira kutora. Tinofanira kunyengetera sezvakaita munyori wepisarema uyo akati: “Sikai mwoyo wakachena mandiri, haiwa Mwari, muise mafungiro matsva mandiri, akasimba.” (Pis. 51:10) Tinofanira kubvuma kuti mafungiro edu anoda kuchinjwa tokumbira Jehovha kuti atibatsire. Tingava sei nechokwadi chekuti Jehovha achatibatsira kuchinja? Tinogona kukurudzirwa nevimbiso iyo Jehovha akapa vaIsraeri vaiva nemwoyo wakaoma mumazuva aEzekieri yekuti: “Ndichavapa mwoyo mumwe chete, uye ndichaisa [mweya] mutsva mukati mavo . . . ndovapa mwoyo wenyama, [kureva, mwoyo unobvuma kutungamirirwa naMwari].” (Ezek. 11:19) Jehovha aida kubatsira vaIsraeri ivavo kuchinja, uye anodawo kutibatsira.
12-13. (a) Maererano naPisarema 119:59, chii chatinofanira kufungisisa nezvacho? (b) Mibvunzo ipi yaunofanira kuzvibvunza?
12 Kufungisisa ndiro danho rechipiri rinokosha ratinofanira kutora. Patinoverenga Shoko raMwari zuva rega rega, tinofanira kuwana nguva yekufungisisa kuti ndezvipi zvatinofanira kuchinja pamanzwiro uye mafungiro edu. (Verenga Pisarema 119:59; VaH. 4:12; Jak. 1:25) Tinofanira kuongorora kuti hatisi here kutorwa mwoyo nemafungiro enyika. Tinofanirawo kubvuma kuti tine patisina kusimba, toshanda nesimba kuti tipagadzirise.
13 Zvibvunze kuti: ‘Ndichiri neshanje kana godo mumwoyo mangu here?’ (1 Pet. 2:1) ‘Ndine kakudada here kandinomboita nemhaka yekwandinobva, dzidzo yangu kana mari yandinayo?’ (Zvir. 16:5) ‘Ndinotarisira pasi here vaya vasina zvinhu zvandiinazvo kana kuti verumwe rudzi?’ (Jak. 2:2-4) ‘Ndinotorwa mwoyo nezvinhu zvinopiwa nenyika yaSatani here?’ (1 Joh. 2:15-17) ‘Ndinonakidzwa nevaraidzo ine zveunzenza uye zvekurwisana here?’ (Pis. 97:10; 101:3; Amo. 5:15) Mhinduro dzemibvunzo iyi dzingabudisa pachena zvinhu zvaunofanira kushandira. Patinokunda mafungiro angangodaro ‘akadzika midzi’ mumwoyo medu, tinofadza Baba vedu vekudenga.—Pis. 19:14.
14. Nei zvichikosha kuti tisarudze shamwari dzakanaka?
14 Kusarudza shamwari dzakanaka ndiro danho rechitatu rinokosha ratinofanira kutora. Tingava tichizviziva kana kuti kwete, vanhu vatinoshamwaridzana navo vanogona kutibatsira kana kutikanganisa. (Zvir. 13:20) Patinenge tiri kumabasa kana kuchikoro, kakawanda tinenge tiine vanhu vasingatibatsiri kuti tive nemafungiro aMwari. Asi tinogona kuwana shamwari dzakanaka chaizvo pamisangano yedu yechiKristu. Ikoko ndiko kwatinokurudzirwa kuti tive “nerudo nemabasa akanaka kwazvo.”—VaH. 10:24, 25.
15-16. Satani anoedza sei kuchinja mafungiro edu?
15 Yeuka kuti Satani anoda chaizvo kuchinja mafungiro edu. Anoita zvese zvaanogona kuti avhiringidze kushanda kwechokwadi cheShoko raMwari.
16 Satani anoramba achibvunza mubvunzo waakabvunza Evha mumunda weEdheni wekuti: “Ichokwadi here kuti Mwari akati . . . ?” (Gen. 3:1) Munyika inotongwa naSatani, tinowanzonzwa mibvunzo inoita kuti tisava nechokwadi nezvatinotenda yakadai sekuti: ‘Ichokwadi here kuti Mwari haabvumiri kuti murume nemurume kana kuti mukadzi nemukadzi varoorane? Ichokwadi here kuti Mwari haadi kuti upemberere Krisimasi nemazuva ekuberekwa? Ichokwadi here kuti Mwari anoda kuti urambe kuwedzerwa ropa? Ichokwadi here kuti Mwari ane rudo anoda kuti urege kushamwaridzana nehama neshamwari dzakadzingwa muungano?’
17. Tinofanira kuitei kana tikabvunzwa mibvunzo inoita kuti tisava nechokwadi nezvatinotenda, uye VaKorose 2:6, 7 inoratidza kuti izvozvo zvingaguma nei?
17 Tinofanira kuva nechokwadi nezvatinotenda. Kana tikasawana mhinduro dzemibvunzo inokosha pamusoro pezvatinotenda, tinotanga kusava nechokwadi nazvo. Izvozvo zvinogona kutanga kukanganisa mafungiro edu, zvoparadza kutenda kwedu. Saka tinofanira kuitei? Shoko raMwari rinotiudza kuti tichinje mafungiro edu, kuitira kuti tizive tega “zvinodiwa naMwari zvakanaka, zvinogamuchirika uye zvakakwana.” (VaR. 12:2) Kana tikagara tichidzidza tinogona kunyatsova nechokwadi chekuti zvatakadzidza muBhaibheri zvakarurama uye kuti zvinodiwa naJehovha zvakanaka. Tinobva tava semuti une midzi yakasimba ‘tichidzikamiswa pakutenda.’—Verenga VaKorose 2:6, 7.
18. Chii chichatibatsira kuti tisakanganiswa nenyika yaSatani?
18 Hapana munhu anogona kukushandira kuti asimbise kutenda kwako. Saka ramba uchiitwa mutsva pamafungiro ako. Ramba uchinyengetera uye kumbira kubatsirwa nemweya waJehovha. Fungisisa uye ramba uchiongorora mafungiro ako nevavariro dzako. Tsvaga shamwari dzakanaka dzichakubatsira kuti uchinje mafungiro ako.Kana ukadaro uchazvidzivirira kuti usakundwa nenyika yaSatani wobudirira kuparadza ‘kufunga kwese uye zvinhu zvese zvakakwirira zvinopesana nekuziva Mwari.’—2 VaK. 10:5.
Zvinhu zvipi zviviri zvatinofanira kuita zvinotaurwa pana VaRoma 12:2?
Zvinhu zvipi zvitatu zvatinofanira kuita kuti tichinje mafungiro edu?
Tingashandisa sei zano ratinowana pana VaKorose 2:6, 7?
^ ndima 5 Zvinhu zvakadai semakuriro atakaita, tsika nemagariro edu, uye dzidzo yatakawana ndizvo zvinoumba mafungiro edu. Tinogona kunge tiine mafungiro asina kunaka akadzika midzi matiri. Nyaya ino ichatiratidza kuti tingabvisa sei mafungiro asina kunaka atingadaro tiinawo.
‘Chenjerai Kuti Pasava Nemunhu Anokutorai Senhapwa’!
Vimba naJehovha Paunenge Uchishungurudzika
Batsira Vamwe Pavanenge Vachishungurudzika
Zvatingaita Kuti Tisabatwa Nemusungo waSatani
Gwaro Rekare-kare Rinovhurwa
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA June 2019
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA June 2019
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA June 2019